Olee otú mbubata WAV faịlụ ka iTunes u
Olee otú mbubata WAV faịlụ ka iTunes
iTunes naanị akwado audio na AA3 na MP3, na vidiyo na MP4, MOV, M4V ma itinye na koodu na MPEG-4 na H.264. Ị e mgba na n'oge gara aga mbubata WAV ka iTunes n'ọbá akwụkwọ? Yeah, ọ bụ ezie na iTunes mara ọkwa na-akwado WAV format, ọtụtụ mgbe, anyị ka nwere ike mbubata WAV faịlụ ka iTunes. Ọ bụ n'ezie nnọọ na-akụda mmụọ na-egwu WAV na iTunes.
Ebe a bụ ngwọta. Ị nwere ike iji a WAV ka iTunes conveter iji tọghata WMV ka iTunes dakọtara formats. Gụọ isiokwu n'okpuru iji nweta gị mma WAV ka iTunes Ntụgharị.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional WAV ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Free WAV ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online WAV ka iTunes Ntụgharị
Na Wondershare, anyị mepụtara Video Ntụgharị, onye nwere ọgụgụ isi omume nke na-enweghị nsogbu na niile na converting WAV faịlụ nke mere na ha nwere ike na-egwuri na iTunes. Ma faịlụ na-abịakọrọ ma ọ bụ uncompressed, Wondershare Video Ntụgharị-enyere gị aka mbubata ha ka ha iTunes na click nke a ole na ole buttons.
Professional iTunes Ntụgharị: Ị nwere ike iji ya iji tọghata WAV, WMV, MKV, AVI, FLV na ndị ọzọ formats ka iTunes akwado video.
High mmepụta video àgwà: Ị nwere ike tọghata ọ bụla video ka nkịtị, 3D na HD vidiyo na ZERO àgwà ọnwụ.
Super Fast Ntụgharị: Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla Ntụgharị na ahịa, na-eme ị gụsịa dum akakabarede usoro na dị nnọọ ole na ole minutes.s
Ike video nchịkọta akụkọ: Dị nnọọ-a ngwá ọrụ iji nyere aka gị video na kpochapụwo video edezi atụmatụ.
Ọkụ video ka DVD: Ị nwere ike iji ya na-esure WAV ka DVD na dị nnọọ 3 nzọụkwụ, na ahụ na-eche free na-enwe ihe nkiri na a ibu ihuenyo.
Olee otú iji tọghata WAV ka iTunes
1. Import WAV faịlụ
Mgbe ị na wụnye ya, ị nwere ike okpukpu abụọ pịa oche icon na-agba ọsọ ngwa a. Ma na-eche free na-amalite gị oru ngo.
Ke isi interface, e nwere bọtịnụ. Dị nnọọ pịa ya mbubata gị WAV faịlụ a usoro. Ma ọ bụ ị nwekwara ike ozugbo ịdọrọ ha ka ha a usoro.
Ozugbo, a WAV faịlụ ga-edepụtara ke ekpe item trey nke ngwa a. Ọ na-gosiri dị ka n'okpuru.
2. Họrọ otu iTunes dakọtara format dị ka mmepụta format
Anyị maara, iTunes akwado MP3 audio usoro. Ihe bụ ihe ọzọ, MP3 nwere n'uju nkwado nke iche iche ngwaọrụ na ngwa software wdg converting MP3 si WAV dị mma oke maka gị, n'ihi na ị pụrụ iji mmekọrịta ha ka ha iPod music ọkpụkpọ mgbe e mesịrị.
Iji họrọ MP3, n'akụkụ aka nri nke interface, dị nnọọ pịa "mmepụta Format" button imeghe mmepụta format window, ebe i nwere ike na-aga "usoro"> "Audio"> "MP3".
3. tọghata WAV ka iTunes
Mgbe e mere ihe nile, na ala-nri akuku nke Video Ntụgharị 's interface, ị nwere ike pịa "tọghata" button. Ugbu a, a na ngwa na-converting gị faịlụ ka MP3 maka iTunes. Ọganihu mmanya e gosiri na Percent Complete na fọdụrụ oge. Mgbe akakabarede a mere, i nwere ike ịhụ na mmepụta faịlụ dị ka mmepụta ụzọ gị ịtọ.
Ẹkedori iTunes, na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ MP3 faịlụ site na mmepụta nchekwa iTunes n'ọbá akwụkwọ. Na-egwu ha na Apple ngwaọrụ, dị nnọọ-anọgide na-mmekọrịta ha ngwaọrụ gị.
Video Tutorial: Olee otú Jiri WAV ka iTunes Ntụgharị
# 1. Free WAV ka iTunes Ntụgharị Wondershare Video Converter Free
Achọ a free WMV ka iTunes Ntụgharị? Ị na-nri ebe. Nke a ngwa nwere bụghị naanị video akakabarede ọrụ, ma na-ahapụ gị dezie videos na ibudata video si ọtụtụ saịtị.
Pro: a kpam kpam free WMV ka iTunes video Ntụgharị, otutu atụmatụ
1. Ọ dịghị ngwaọrụ presets dị ka setịpụrụ dị ka mmepụta formats. Ọ pụtara na ị nwere ike iji ya iji tọghata videos ka iPhone, iPad, ma ọ bụ gam akporo igwe ozugbo.
2. Mgbe ọ na-abịa mmepụta video àgwà, ọ na-apụghị jiri ya tụnyere Video Converter Ultimate.
3. Ọ na-adịghị enweta ikike nke na-ere ọkụ DVD.
Olee otú m tọghata My Audio File ka WAV File Format
Olee otú mbubata Videos Gị iTunes Library
Olee otú iji tọghata MKV ka iTunes Library
Olee otú iji tọghata MOD ka QuickTime MOV na Mac OS X odum / Windows
MP4 ka Windows Movie Onye kere: Olee Otú Ị Pụrụ Mbubata MP4 ka WMM
Idozi Ndakọrịta Nsogbu maka AVI
Top 10 Free iPad & iPhone Video Ntụgharị
Olee otú Play MKV Files na Xbox 360
XviD / DivX ka iTunes: Olee mbubata DivX / XviD faịlụ gị na iTunes Library
> Resource> tọghata> Olee mbubata WAV faịlụ ka iTunes